Unofanira kuziva izvi vasati vanotenga E-Skateboards - Jomo Technology Co., Ltd
Unofanira kuziva izvi vasati vanotenga E-Skateboards
Mubvunzo chii chinofanira kufungwa? Chokwadi chacho Safety. Saka, isu Koowheel dzemagetsi Skateboards nokutengesa vakawana CE, RoHS, FCC UN38.3 zvitupa. Sezvinoita motokari kana bhasikoro, Skateboards izvi yemagetsi anowedzera vanofanira kuva zvakanaka-vakaramba vaine chinangwa kumhanya muchechetere. Kana kunge asingadi kutarira kufanana ose yemagetsi Skateboards kuti iwe ndamboona kusvikira zvino. Kuti pfungwa yakafanana zvino kunorevawo kunyange nyaya yakaita Skateboards, kubvumira skaters kuita zvimwe zvinhu havagoni pamusoro kuipa puranga, zvakafanana mabhiza pamukwidza. By ikozvino ndine chokwadi kuti waita wafungidzira kuti ichi skateboard zvakananga ane injini diki mukati mawo. Batteries, Kunyange zvakadaro, zvinoita sokuti zvakadaro kuva vakaomerwa chokufunga vazhinji mufashoni yemagetsi skateboardmazano. Kare, vatengi akawana kuti avo yemagetsi skateboard yaizova pamusoro mutemo kuti rwendo mumugwagwa akadzima preorder yavo. broken-bhendi skateboard nokutengesa ( Koowheel muchiso) anozviti ndiye lightest, uchitsanya, uye vakawanda mukuru yemagetsi skateboard panyika. Pano tiri kukupa mamwe mazano pamusoro kushandisa dzemagetsi Skateboards makachengeteka.
Pane vamwe here inotonhorera yemagetsi Skateboards pamusoro pamusika uye vashoma vavo zvikuru ingeniously yakatanga. Kune Skateboards. Range - iwe zvino haafaniri kuva Kana Pandakatenderera kushanda kana fakaroti kungovimba anotora maminitsi gumi chero nyaya nayo kubva Skateboards vakawanda vanogona kufukidza izvi chete mutengo. Kubva vaviri muaizi PALS avo ndatsunga kuwanisa yakanakisisa yemagetsi skateboard ino, Koowheel Boards vari vatungamiri vari nemauto pamusoro dzemagetsi Skateboards. Bhodhi ichi anoita zvinoshamisa zvakanaka pamusoro kure-huru kwenzvimbo, unonyatsoruramisa nyaya kuti mapuranga dzakasiyana havanyatsooni kuzovewo nyore. Kazhinji mumwe akakura kuderera KV injini Zvaringana, yaiva nyaya uye climes angu zvikomo chaizvo zvakanaka uye ndiye isingadhuri sarudzo. Chii chaunacho nezvacho kwokutanga pane kunotenga imwe? ndiro uchitsanya yemagetsi skateboard , zviri zvakare chaizvo munyoro. Sei zviri kudaro munyoro? Zvinogona zvimwe kusvika uchizvipa anosvika 30 km / h uye pamwe chete replaceable bhatiri rongedza, 2pcs bhatiri packs it hunogara 60km, enda yakareba.
Ndeipi nzira inobudirira yokuziva imwe yakanakisisa yemagetsi skateboard kuti vatasvi, vana uye vanhu vakuru? Chimwe spec kuti anokuudza ichi skateboard yemagetsi nechinangwa vakuru ndiyo yavose sezvavakatarirwa goho simba pamusoro injini. It is yemagetsi skateboard anopiwa ane electric motor izvo rinoshandiswa kure. The kure zviri nyore chaizvo kushandisa Zvisinei zviri pachena kuti ishande. Mamaneja kure nyore kushandisa anobvumira munhu nyore kumhanyisa - uye kunyange zvinoreva kuti iwe unogona dzinofamba kune nechekumashure rudzi!
Post nguva: Mar-09-2018